I-Modafinil - I-Smart Smart Drug ngeeNotropic Benefits | AASraw steroid powder
I-Modafinil - I-Smart Smart Drug eneeNotropic Benefits
/Blog/modafinil/I-Modafinil - I-Smart Smart Drug eneeNotropic Benefits
ezaposwa ngomhla 12 / 15 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo modafinil.
1.Ziziphi iiDrugs zeDrugs? 2.Yintoni iModafinil?
3.How Modafinil isebenza njani? 4.Modafinil Ukusetyenziswa kunye neNzuzo
5.Modafinil Iziphumo eziPhakathi kunye neziNani 6.Adrafinil vs Modafinil vs. Armodafinil
7.Ukuphi ukuthenga i-Modafinil yangempela ipowder eluhlaza kwi-intanethi?
I-Modafinil i-powder video
|. Modafinil Nootropics Abalinganiswa basisiseko:
I-molecular Formula: C15H15NO2S
Isisindo somzimba: 273.35
umbala: Powder White
1.Ziziphi Iimvayili zeMicrosoft ?
IiNootropiki, okanye iziyobisi eziphambili, zisetyenziselwa ukujikeleza ihlabathi ngabafundi, abashishini, abanikazi bamashishini abancinci, abadlali, abadlali be-poker kunye nabafazi. Zisetyenziselwa ukukhulisa ikhono lokufunda, ukuphucula umsebenzi wokukhumbula, ukuphucula ukugxilwa kunye nokuxininisa, kwaye kwanokuphucula izakhono zokunxibelelana ngomlomo nangobhaliso.
Modafinil isilwanyana esikhuthazayo sokunyusa i-analeptic isasazwa yiCephalon Inc. kwaye ivunyiwe njengeziyobisi nge-FDA (Ukutya kunye neDrug Administration) eUnited States. Nangona okokuqala bevavanywa njengeyonyango ukuphatha izifo ezithile zokulala, maxa wambi zibizwa ngokuthi "izidakamizwa ezihlakaniphile" eziyaziwayo ukuphucula ukusebenza kweso sifundo esinokukhubazeka nokungabikho kokulala.
Uya kubona kwakhona kuthengiswa phantsi kwegama elithi Provigil, i-Sun Pharma Modalert, i-Alertec, i-Modapro kunye ne-Modiodal.
I-Modafinil yafunyanwa ekuqaleni kwi-1976 nguprofesa wonyango waseFransi u-Michel Jouvet ngokudibanisa nenkampani yeComphalon. Emva kokuba kubonwe ukuba kubangele ukuhlaselwa kwezilwanyana kwizifundo zezilwanyana kwaqhutyelwa ukuba kusetyenziswe okokuqala ngqa kubantu njengonyango lovavanyo lwe-narcolepsy kwi-1986.
Ukususela ngoko, ukusetyenziswa kweModafinil kwandiswe kwezinye iimeko ezinxulumene nokulala, ezifana nokugula kwesifo sokulala nokugula okungapheliyo emini ehambisana nokuphazamiseka kokuphazamiseka kokulala.
I-Modafinil iphinde isetyenziswe ngabantu baseBrithani nabaseMerika ukugcina amasosha avuke kwaye asebenze kumazinga aphezulu ukuya kwiiyure ze-40 ngexesha. Izifundo ziye zazimisela ukuba i-Modafinil isebenze ekunciphiseni okanye ekupheliseni umonakalo wokubanjwa kwexesha elifutshane kwintliziyo.
Ngenxa yesi sizathu, isetyenziswa ngokuqhelekileyo njenge-nootropic ukuphucula ukusebenza kwengqiqo ikakhulukazi kubantu abathile abangenalo ukulala ngokwaneleyo.
3.Indlela iModafinil isebenza ngayo ?
Iindlela ezichanekileyo zokwenziwa kweModafinil emzimbeni aziwa. Uphando luye lwabonisa ukuba le nyeza ineempembelelo kwiinkqubo ezahlukeneyo ze-neurotransmitters kwingqondo kunye nenkqubo yesantya ephakathi kwe-Histamine, iDopamine, Epinephrine (Adrenaline), i-Norepinephrine (i-Noradrenaline), iSerotonin, ne-Orexin (Hypocretin).
Ukuthatha i-Modafinil kuye kwabonwa ukuphakamisa amanqanaba e-histamine kunye nomsebenzi wokuqhuba umsebenzi kwinkqubo yesantya ephakathi. Iimpembelelo zeModafinil ziboniswa ukuba zigubuke emva kokuba i-concentration ye-histurine ye-neuronal yemvelo iphelelwe yinto inhibitor enamandla. Oku kuhambelana nesilwanyana esifana nesibizwa ngokuthi i-methylphenidate, engenzi ngendlela efanayo ne-fluoromethylhistidine, i-histidine decarboxylase inhibitor.
I-Modafinil, icandelo eliphambili likhathalo legama elifanayo, lingakhange lisetshenziswe ngokugcwele kumgangatho onokuyityhila yonke imigaqo emva kwendlela esebenza ngayo. Uphando oluninzi lufumene ukuba lusebenza ngokutshintsha ama-CNS amanqanaba e-histamine emzimbeni womntu.
Izifundo ezilawulwayo kwiimiceli zityhila ukuba iziza zenza indlela yazo kwi-orexinergic system. I-Orexin yi-peptide eyenziwa njenge-neurotransmitter kwaye ibandakanyeke ekulawuleni ukulala / ukuvuswa kwamazwe kunye nokugcinwa kokulinda. Izifundo zokuvavanya ezingenazo i-neuron ezifanelekileyo zahluleka ukuphendula njengoko zilindelwe, zibonisa ukuba kubaluleke kakhulu kwe-orexin kule nkqubo.
Uphando lweModafinil luye lwabonakala luchaphazela iDopamine kunye nendlela yokubonisa. Kwisifundo esakhangela iindlela ezahlukeneyo kunye ne-neurotransmitters, i-Modafinil yabonakala ichaphazela i-Dopamine transporter, isebenza njenge-Dopamine reuptake inhibitor. Uphando olongezelelweyo usebenzisa i-PET ukujonga kwizigulane zabantu lubone ukuba ngokuhlala kwiziko le-Dopamine zokuthutha, i-Modafinil yanda kakhulu amanqanaba eDopamine kwingqondo.
4.Ukusetyenziswa kweModafinil kunye neNzuzo
I-Modafinil iboniswe ukubanceda abantu bahlale bephapheme kwaye bekhuthele, kunye nokwenza iingqondo zabo zicaca ngakumbi xa imemori yabo sele ibuhlungu kakhulu ngokuqala kokulahlwa kokulala.
Izifundo ziye zabonisa ngempumelelo ukulungelelaniswa phakathi kokusetyenziswa kwesi sigulo kunye nokugcina umsebenzi wengqondo kwimeko ephilileyo ngokuchasene nezinto ezifana nokungabikho kokulala. Nangona kunjalo, akubona bonke abakwazi ukudibanisa i-Modafinil ekuphuculeni umsebenzi wengqondo kwisifundo sovavanyo lwabantu.
I-Narcolepsy, Shift-Work Sleep disorder, kunye ne-Sleep Apnea
Ukuqhaqhaqhaqhayisa kwimeko ye-neurological echaphazela ukulawula ukuvuka nokulala. Le meko ibangela ubuthongo obuninzi obusuku, kwaye ibenokubangela ukuba abantu baphelelwe amandla kwaye baphule kulo lonke usuku. Isizathu esona sizathu sogqithiso lwe-narcolepsy alungaziwa, nangona kukho amathuba amaninzi, kwaye unxibelelwano oluqinileyo kunye nezinto ezithile zofuzo. Ingxenye yendlela iphuma ngenxa yokulahleka kwe-orexin yokukhulula i-neurons kwingqondo.
Kwiinkalo ezininzi zophando ezilawulwa yi-placebo eziphambanwayo, i-Modafinil ibonwe ukuba yonyango olufanelekileyo lokunciphisa ubuthongo bemini ebantwini abaneenqatha. Amanqaku kwi-Multiple Sleep Latency Test kunye neSondlo soVavanyo loKuvuka kuphuculwe kakhulu usebenzisa iModafinil ngaphezu kwe-placebo. Ubuthongo bokulala ebusuku bubekwe iliso ngexesha lezilingo usebenzisa i-polysomnography kuye kwafunyanwa ukuba kungathinteki kakubi usebenzisa iModafinil xa kuthelekiswa ne placebo.
Emva kokuyeka unyango, iimpawu zeedapepsy zabonwa ukuba zibuyele kwizigulane kumanqanaba abo asezantsi xa zingafumani unyango. Kukho iingxelo zabantu abaphuhlisa iimpawu zokurhoxiswa ezibonwayo kunye nezinye izikhuthazo ezifana ne-amphetamines, kwaye ukuphuhliswa kokuxhomekeka kubonakala kungenjalo. Isiphumo esichaphazelekayo esichazwe ngokuqhelekileyo kwiziphumo ze-Modafinil ngenxa ye-narcolepsy ibe yintsholongwane, kwaye amanqanaba awakungekho mkhulu kunako oko kwabikwa nge-placebo.
Abaphengululi baye bagqiba ekubeni iModafinil yindlela yokunyanga yokunyamekela ngokuqhelekileyo yokulawula i-narcolepsy, kwaye ixhaphake ngokuqhelekileyo kule njongo yonyango yokuqala. Ukusetyenziswa kwamanye ukuphazamiseka kokulala kuye kwanda, ingakumbi ukuguquka kwesifo somsebenzi wokulala nokukhusela i-apnea / hypopnea syndrome.
Ukukhubazeka kokulala kwe-Shift yintlupheko yesigqirha esenzayo xa abantu benemisebenzi abayisebenzayo ngexesha lokulala ebusuku. Oku kungabantu abahlala beqhuba ubusuku obuninzi bemisebenzi eyahlukeneyo okanye abo baneshedyuli ejikelezayo ebangela ukuba baphumelele ngokusebenza ebusuku. Oku kubonakala nakwabanye abantu abasebenza ixesha elide kakhulu, njengogqirha.
Njenga-narcolepsy, abantu abane-disorder-sleep function disorder experience of sleepiness daytime. Ukongezelela, banokulahla xa bezama ukulala ngaphandle kweeyure zokulala eziqhelekileyo (okt ebudeni bemini). Ukuba abantu banako ukubuyela kwiipatheni zokulala eziqhelekileyo kunokuba iimpawu ziza kuzixazulula ngokwabo, nangona oku akukhethwa ngabantu abaninzi.
Kwisifundo esithile, izigulane ezine-disorder-sleep function disorder zanikwa i-200 mg ye-Modafinil okanye indawo ye-placebo phambi kweenguqu zabo. Izigulane eziphathwe nge-Modafinil zabonwa ukuba zincitshiswa kwixesha kwaye ixesha lokuqwalasela lithe laphela xa livavanywa ekuhlolweni kokuqapha. Ukuphuculwa okuthobekileyo kwi-latency ukuze kufike ixesha lokulala kwabonakala.
Nangona kunjalo naphezu kwezi mphuculo, izigulane zaqhubeka zilala ngokugqithiseleyo kwaye zisebenza nzima ebusuku. Abaphandi baye bathi ngenxa yokulalisa okwehlayo okwenzekayo ukuba kuphuculwa unyango olungakumbi.
I-sleepiness apnea / hypopnea syndrome (OSAHS) isifo esiyingozi esenzekayo xa izihlunu zisekela ulwimi kunye nesalathiso esilulayo emlonyeni kunye nokubangela ukuba uhambo lwangaphakathi lube lukhulu okanye luvalwe ngokupheleleyo. I-Apnea ibhekisela kwixesha lokukhutshwa ngokupheleleyo kwaye akukho phefumla, ngelixa i-hypopnea ibhekisela ekuphefumuleni okucothayo okanye okungafihliyo okwenzeka ngokukhuseleka komoya.
Iimpawu zokuphefumula ukulala ziquka ukuhluma okukhulu, ukugqithisa ixesha lokuphefumula xa ulala, uvuka, uvuka ngomlomo owomileyo kunye nomqala omzimba, iintloko zeentsasa kunye nokulala ngokugqithiseleyo kwemini.
I-Modafinil ngamanye amaxesha isetyenziswe njengonyango oluthile lokunyanga iimpawu zokulala kwe-apnea. Ukusetyenziswa kwayo akuyi kuzama nokuphilisa le ngxaki, kodwa kunokuba kuphuculwe ubuthongo bemini edla ngokubakho ngenxa yokuphazamiseka kweendlela zokulala ezibangelwa ukuphefumula ebusuku. Ucwaningo lwe-placebo oluphethwe yi-doublebo blind-blinds luye lwabonisa ukuba iModafinil iphucula kakhulu ubuthongo bemini ngokuqhathaniswa ne-placebo.
Ukukhathazeka kweengxaki nokukhathazeka-Ukuphulukana nokuphazamiseka kwezifo
Enye yeendlela eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo zokusetyenziswa kweleyile ye-Modafinil kukuba i-Attention Deficit disorder (ADD) kunye ne-Attention-defence Disperactivity disorder (ADHD). Abantu abaninzi basebenzisa i-Modafinil kule miqathango ngenxa yempembelelo evuselelayo. Uninzi lwengxelo ye-intanethi kwi-intanethi esebenzisa i-Modafinil ye-ADHD ibancedisa ukuba bahlale bekhuthazwa kwaye bajolise kumsebenzi okhoyo.
Olunye uphononongo lukhankanya ukuba ukusebenzisa i-Modafinil ayinayo imiphumo emibi kakhulu (umzekelo, ukuxhalaba, ukuxinezeleka) amayeza anjengeAdderall, Ritalin, dextroamphetamine kunye ne-dexmethylphenidate.
Iziphumo ezininzi zophando ziye zavavanywa zisebenzisa i-Modafinil ukulawula i-ADHD kubantu abadala. Olunye uphando luqhathanisa i-Modafinil kwindawo ye-placebo, ngelixa abanye bafanisa zombini iModafinil kunye neyeza eziqhelekileyo kwindawo ye-placebo.
Olunye uphando lwavavanya ukuphumelela kweModafinil xa kuthelekiswa nesidakamizwa esiqhelekileyo dextroamphetamine. Izigulane ezithathileyo zonyango olusebenzayo zibonwe ukuba ziphucule kakhulu amanqaku kwi-DSM-IV ADHD uludwe xa kuthelekiswa ne placebo. Abaphandi baphetha ngokuthi iipilisi ze-Modafinil ziyindlela efanelekileyo yokuvuselela abantu abadala abane-ADHD.
Ucwaningo olwenziwe ngokuphindaphindiweyo, olungenangqiqo, olwenziwe ngokungenangqondo, olune-placebo olulawulwa yi-placebo lufumene ukuba i-200 mg dose yeModafinil yakwazi ukuvelisa indlela efanayo yokuphuculwa kwengqondo kwizigulane ezine-ADHD xa kuthelekiswa nezigulane eziphilileyo. Abaphandi baphetha ngokuthi i-Modafinil inokuthi ibe yonyango lonyango lwe-ADHD xa kuthelekiswa nokukhuthaza abantu.
Ukusetyenziswa kweModafinil kubantwana kwi-ADHD akukhuthazwa ngeli xesha. Uphononongo oluqhutywe ngokusebenzisa uhlobo oluthile lweqondo lweModafinil oluthiwa yiSpllon kubantwana abane-ADHD iphelile ngemiphumo emibi kakhulu emibi kwinani elincinci labathathi-nxaxheba.
Isifo sikaStevens-Johnson sisifo esingaqhelekanga kunye nesifo esiqhekezayo sikhumba kunye neembumba. Izimpawu zayo eziphambili ziyi-fever, ukukhathala, ubuhlungu besikhumba, ubomvu obomvu okanye obomvu, kunye ne-blisters kwiimbumba ezinomlomo zomlomo, impumlo, amehlo kunye nezitho zangasese.
Izifundo ezininzi ukususela kweso sihlandlo zibonise ukusebenza nokukhuseleko kwe-Modafinil ekusebenziseni abantwana kwi-ADHD, nangona kungavunyelwanga ukusetyenziswa kweli qela. Ukongezelela, i-Modafinil okwangoku ayivunywanga yi-FDA njengedyirha yokuphatha i-ADD okanye i-ADHD kubantu abadala, kwaye uphando olungakumbi luyafuneka ukuba lunikwe iziphumo ezipheleleyo kulezi ngxaki.
Iimpawu zoKhathala kwiXhoxiso kunye ne-Multiple Sclerosis (MS)
Enye yeempawu eziqhelekileyo ezichazwe ngokuxinezeleka okungapheliyo kukukhathala. Ngaphandle kwezigulane ezithathwa ngempumelelo ngentsholongwane echanekileyo njenge-Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (i-SSRIs) kunye nokuphucula kwezinye iimpawu ezinxulumene nokudakumba, ukukhathala nokulala okugqithiseleyo kusenokuqhubeka.
Ukongezelela, ezinye izigulane aziphenduli kunye nokufuna amayeza aqhelekileyo, kunye nokudibanisa kwabo baxinzelelekileyo kunye noModafinil kubonwe umsebenzi kwezinye iimeko.
Izifundo ezininzi ezilawulwa yi-placebo eziyimpumpo zibukele kwi-Modafinil ukunyuswa kwezigulane ezinokukhathala nokulala, eziphendula ngokunyanga kwi-SSRI yonyango yokudandatheka. Kwizifundo ezintathu ezihlukeneyo kodwa ezifanayo, i-Modafinil yayisetyenziselwa unyango olulandelwayo kunye nee-SSRI ezixinzelelekileyo kwizigulane ezazisabelayo okanye ezingapheliyo kwi-SSRIs yedwa.
Kuzo zonke izilingo ezintathu, i-Modafinil yabonakala ngokuphucula kakhulu ukukhathala nokulala kwizigulane kwixesha elifutshane (ngaphantsi kweeveki ze-6). Abaphandi baphetha ngokuthi i-Modafinil inokuba yindlela yokwenza izigulane ezisebenzisekayo kwizigulane ezinexinzelelo, ngakumbi ezo zinkathazo.
Njengoko kubonwe kwizigulane ezinexinzelelo, enye yeempawu eziqhelekileyo ezinxulumene ne-Multiple Sclerosis inokukhathala. Uphando oluthile luyenziwe kwizigulane ezile meko, nangona oko kwenziwe oko kuthembisa.
Uphononongo olulodwa lwaluyimpumputhe, isigaba se-2, uvavanyo lwesibini lwamaziko olufanisa i-Modafinil ne-placebo ekuphuculeni ukukhathala komzimba kwizigulane ezine-MS. Izigulane zanikwa kuqala iindawo zendawo kwiiveki ze-1-2, kwaye i-200 mg Modafinil iipilisi kwiiveki 3-4, i-400 mg Modafinil iipilisi zeveki 5-6, kwaye i-placebo kwakhona iiveki 7-9.
Abaphandi babengaboniyo unyango ukuba baqinisekise ukhuseleko lwabathathi-nxaxheba. Ukuqinisekisa iziphumo ezingenakulungelelaniswa, ukuphumelela kwonyango kwavavanywa kusetyenziswa izikali zokulinganisa, uvavanyo oluphambili luyi-Scessing Scout Scale (FSS).
Kwafunyaniswa ukuba ukukhathala nokulala kwimihla kwakuphuculwe kakhulu ngokusebenzisa i-200 mg umthamo we-Modafinil, xa kuthelekiswa ne-400 mg Modafinil dose kunye ne-placebo. Abaphandi bathi akucaci ukuba kutheni i-400 mg ephezulu ayifumananga ukuphucula umonakalo obonwayo kunye ne-200 mg dosage, ekugqibeleni ukuba bekube ngenxa yokunyamezela okanye iziphumo ezinobungozi ezinxulumene nomthamo obonakalisa nayiphi na inzuzo enokukhathala.
Ngokubanzi abaphandi baphetha ngokuthi i-Modafinil inokuyinyamekela kwaye yonyango efanelekileyo yokuphucula ukukhathala nokulala kubantu abane-MS.
Iimpembelelo zeNokotropic Cognitive Implementation
Ezinye zezona zinto ziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo zokusetyenziswa kwelebula zeModafinil zisebenzisa isicatshulwa njengeziyobisi ze-nootropic ukwenzela ukuphuculwa kwengqondo. Abantu abahlukahlukeneyo abavela kwizikolo zaseyunivesithi baya kwi-Wall Street ibhanki kubaashishini abasebenzisa iModafinil ukuphucula imemori, ukufunda, ukugxila kunye nokuqwalasela.
Olunye uphononongo oluhlolisisiweyo lweziphumo zophando zophando oludlulileyo lufumene ukuba i-Modafinil ibonisa ngokucacileyo ukuphucula kwimemori yokusebenza kunye neye-episodic emva kokusetyenziswa.
Olunye uphononongo luye lwagqiba ukuba iModafinil ngokuyinhloko iphucula umsebenzi wokuqonda ngokumalunga nomsebenzi olawulayo, ngakumbi xa uceba kwaye wenza imisebenzi enzima neyinkimbinkimbi.
Omnye uphando ophinda ube yimfama phakathi kokufunda uphando lubhekiselele kwimiphumo yokuphuculwa kwengqondo engenzekayo i-Modafinil yayinabantu abadala abadala.
Kufunyenwe ukuba i-Modafinil isebenzise kakhulu intsebenziswano kwiimvavanyo ezahlukeneyo ze-neuropsychological, kuquka ukubonwa kwendlela yokubonakalayo, ukucwangciswa kwendawo, kunye nokuhlolwa kwempendulo ye-stop-signal. Ngokwahlukileyo, ukuphendula kwiimvavanyo ezithile kubonakala kuncitshiswe, kuphakamisa ukuba iModafinil inokukunceda ukuvimbela ukungahambi kakuhle nokuphucula ukuphendula ngokuchanekileyo.
Ngokufanayo nokuphononongwa kwabasebenzisi okufumaneka kwiifom ze-nootropic kwi-Intanethi, abathathi-nxaxheba kwisifundo bavakalisa ukuba baqaphele ngakumbi kwaye baqwalasele i-Modafinil, kwaye banokuphucula amanqanaba ombane.
Uphando olungakumbi lufunekayo kule ndawo ukugqiba ngokupheleleyo imiphumo ye-Modafinil inokuba nabantu abanempilo ukuphucula amandla okuqonda.
5.Iimpawu zecala leModafinil kunye neMilinganiselo
I-Modafinil ithathwa njengekhuselekile ngaphandle kwemiphumo emibi xa isetyenziswe njengalathwayo. Kukho imiphumo emibi yeModafinil enokuhlangana nayo ngexesha lokusetyenziswa ngokuqhelekileyo.
Ngokuphonononga ngokugqithisileyo kweziyobisi, abaphandi baye bafumana uluhlu olulandelayo lweziphumo ezinobungozi ezingabangela i-Modafinil:
I-Rhinitis (ukuvuvukala kwe-mucosa yangasese)
Ezinye zezinto ezingabonakaliyo kodwa ezinobungozi ezinzulu zeModafinil zihlukeneyo ezahlukeneyo zesikhumba kunye nokuphendula, kubandakanywa nesifo seStevens-Johnson esasichazwe ngaphambili, ukuphendula kwezidakamizwa kunye ne-eosinophilia kunye neempawu zesistim (DRESS) kunye ne-Toxic Epidermal Necrolysis (TEN).
Ukuba ufumana nayiphi na imiphumo emibi ngelixa uthatha iipilisi ze-Modafinil, kufuneka udibane nogqirha wakho okanye uphemistri. Ukuba ungathanda ukusebenzisa le mveliso yonyango, cela ugqirha wakho umyalelo okanye uphande ukuba uvumelekile ukuthenga i-Modafinil kwi-intanethi kwilizwe lakho ngaphandle kwemvume.
Xa isetyenziselwa i-labels kusetyenziswa, i-Modafinil ibhalwe ngokuqhelekileyo kwii-200 mg ngosuku. Ngamanye amaxesha umthamo ophantsi we-100 mg ngosuku usetyenziselwa ukuqala, kwaye i-dosage yonyuka iya kwi-200 mg ngokuthe ngcembe kubantu abathile abanokuvavanya kwi-dose epheleleyo ukuqala.
Akukho zicatshulwa eziqhelekileyo zeModafinil kwii-labels ezisetyenzisiweyo. Uninzi lwabantu luya kulandela ama-dosages afanayo kumadayimethri afunekayo, ngokuqhelekileyo malunga ne-200 mg ngosuku.
Ingcinga efanelekileyo yokufunda iimviwo zikaModafinil kunye namava omsebenzisi ngaphambi kokuba uthathe isilinganisi sakho sokuqala ukuze wazi kakuhle ukuba le nkunkuma ingakuchaphazela njani.
6.Adrafinil Modafinil vs. Armodafinil
I-Adrafinil yinkomfa efana kakhulu ne-Modafinil kwisakhiwo kunye nokusetyenziswa. Ezi zixhobo zombini zifana kakhulu kwisakhiwo se-molecular; Ukwahlukana nje kokubunjwa nguModafinil ulahlekelwa iqela le-amide hydroxyl elineAdrafinil.
I-Adrafinil isebenza njengeprodrug ye-Modafinil. Oku kuthetha ukuba iguqula kwi-Modafinil emzimbeni, kwaye yenze ngendlela efanayo. I-Adrafinil yafunyanwa iminyaka emibili phambi kweModafinil kwi-1974 yinkampani efanayo yezobisi eyayiqala ukufumana iModafinil.
Ngenxa yokuba kufuneka iguqulwe ibe yiModafinil emzimbeni, i-Adrafinil ayinamandla kangako njengoModafinil. Akuyiyo yonke i-Adrafinil kwisilinganiso salesi siza siya guqulwa sibe yi-Modafinil, ininzi iguqulwe ibe yinto engasebenziyo ye-acafifinilic acid.
I-Modafinil ingumsebenzi we-1: Ukuhlanganiswa kwe-1 yeenantiomers ezimbini, uR-Modafinil kunye neS-Modafinil. Ama-enantiomers ziinguqu zemifanekiso yesiganeko; Ngoko ke baneenxalenye zee-molecular ezifanayo, isakhiwo nje sahluke.
Ngokwakhe, i-enantiomer R yeModafinil yaziwa njenge-Armodafinil. Njengeziyobisi, i-Armodrafinil isetyenziselwa iinjongo ezifanayo njengeModafinil, oko kukuthi kuphuculwe ukuphuphuma kwabantu abantu abanenkinga yokulala kunye nobuthongo obunzima. Isiqingatha-ubomi se-Armodafinil sikude kuneModafinil, enokuyenza iphumelele kwezinye iimeko.
I-version ye-brand ye-Armodafinil ebizwa kakhulu yi-Armodafinil yi-Nuvigil, eyenziwa yi-Cephalon nkampani, evelisa igama elibizwa ngokuba yi-Modafinil-Provigil.
7.Kuphi ukuthenga i-Modafinil yangempela ipowder eluhlaza kwi-intanethi ?
Unokufumana umthombo omkhulu we-Modafinil umthombo we-intanethi, kodwa kunzima ukuthenga i-Modafinil yangempela eluhlaza kwi-intanethi. Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso eziyintengiso kwimarike. ngoko xa uthenge iModafinil impahla eluhlaza kwi-intanethi, kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
Iinkcukacha ezingaphezulu iinkcukacha ezifanelekileyo,wamkele ukucofa apha.
tags: imodafinil imiphumo embi
U-Anavar ungenye ye-steroid yokusika engcono kakhulu esetyenziswa ngamadoda nabasetyhini	Indlela yokwenza i-levitra isebenze ngakumbi